उहाँले यो खबर पठाएको कुरा गाउँमा व्यापक भयो । मानिसहरु मलाई भेट्न आउन थाले । उनीहरु रानी ऐश्वर्यासँग आफ्ना कुरा राखिदिन अनुरोध गर्थे । म केही कुरा सुन्थेँ, केही कुरा सुन्दिनथेँ । मेरो आफ्नो तयारी चाहिँ थियो । त्यसमा बुवाले मलाई सहयोग गर्नुभएको थियो । मैले ऐश्वर्या रानीसँग के कुरा भन्ने लेखेर तयार गरेकी थिएँ । त्यसमा मेरो र दाङका महिलाहरुको अध्ययनको विषय र थारुहरुको विषयमा भन्ने भएँ । भनिएको समयमा राजारानीको घोराहीमा सवारी भयो । म पनि गएँ । त्यहाँ निकै भीड थियो । मानिसहरु दर्शन गर्दै, आफ्नो कुरा राख्दै अगाडि बढ्दै थिए । मेरो पालो आयो । मैले भनेँ, ‘सरकार, म कोमल वली । सरकारहरुको निगाहका कारण पढ्न पाएकी छु । अब यसपाली एसएलसी दिँदै छु ।’
त्यो ठूलो कोठामा रानीले महिलाहरुलाई मात्र भेट्नु भएको थियो । अर्को कोठामा राजा वीरेन्द्रले अन्य व्यक्तिहरुलाई दर्शनभेट गर्नुभएको थियो । मेरो पालो आएपछि त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले मलाई अगाडि धकेलिदिए । मैले ठूलो स्वरमा म कोमल वली सरकार भनेकी थिएँ । रानी ऐश्वर्या मुसुक्क हास्नुभयो । अनि एकैछिन यता बस भनेजस्तो हातले इसारा गर्नुभयो । म चुपचाप उहाँको दाहिने साइडमा गएर उभिएँ । केही बेरमा त्यहाँ भीड कम भयो । अनि रानीले मलाई हेर्नुभयो । मेरो हातमा कागज नै थियो ।
मैले सुरुमा रानीलाई विन्ती बिसाएँ, ‘म त किर्तिपुर विश्वविद्यालयको सभासद बन्न चाहन्छु सरकार ।’ त्यसपछि मैले त्यहाँको थारु जाति, संस्कृति तथा महिलाबारे कुरा गरेँ ।’ मैले तुलसीपुरलाई केन्द्रमा राखेर कुरा गरेकी थिएँ । उहाँले तुलसीपुरमा भएको महिला संगठनका लागि दिएको जग्गा सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि प्रयोग गर्दा हुने बताउनु भएको थियो । उहाँले भनेका कुरा त्यहाँ उपस्थित सचिवले टिप्नुभएको थियो । त्यो दिनको समाचार नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भएको थियो । समाचारमा म पनि देखिएछु । काठमाडौंमा भएका मेरा आफन्त र साथीहरुले त्यो कुरा भन्नुभएको थियो । भोलिपल्ट विहान म तुलसीपुर पुगेकी थिएँ, टेलिभिजनमा आएको समाचार हेर्न ।
एसएलसी सकाउँदासम्म ममा धेरै कन्फिडेन्स डेभलप भइसकेको थियो । म खेलकुदमा निकै सक्रिय भएर लागिरहेकी थिएँ । पछि काठमाडौं आएर रेडियो नेपालमा काम गर्न थाल्दा मेरा गीतहरु पनि निकै चलिसकेका थिए । ममा केही गर्न सकिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स डेभलप भइसकेको थियो । त्यसैले म कहिल्यै पनि कामहरु गर्न डराउँदिनथेँ, केही भन्न डराउँदिनथेँ, काममा अगाडि बढिहाल्थेँ । मेरा गीतहरु निकै चल्न थालेको कुरा दरबारमा पनि थाहा थियो । मैले रेडियो नेपालमा काम गर्न थालेपछि राजारानी सहभागि धेरै कार्यक्रमहरुमा उद्घोषण गर्न थालिसकेकी थिएँ ।
त्यस्ता कार्यक्रममा जाँदा पनि मैले अवसर छोपेर राजारानीलाई केही कुरा राखिहाल्थेँ । भन्थेँ, ‘सरकार, यस्तो हुनुपर्यो, यस्तो गर्नु पर्ने भयो ।’ २०५४ सालमा मलाई पनि गोरखा दक्षिण बाहु दिइयो । म यति ठूलो सम्मान पाउँदा निकै हर्षित थिएँ । त्यही साँझ गोरखा दक्षिण बाहु पाउनेहरुबीच डिनर कार्यक्रम थियो । डिनर कार्यक्रममा मेरो अधिराजकुमारी श्रुतीसँग भेट भयो ।
म श्रुतीसँग निकै धेरै पटक नजिक हुन चाहन्थेँ, उहाँका कुरा सुन्न चाहन्थेँ, उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्थेँ । जतिबेला म नजिक हुन्थेँ, म उहाँसँग कुरा गर्न थालिहाल्थेँ । एकपटक पद्मकन्या क्याम्पसमा कुरा भएको थियो । त्यहाँ मैले पहिलो पटक श्रुती कति खुला मिजासको हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएको थिएँ । त्यो कार्यक्रममा म एउटा अडियन्स भएर मात्र गएकी थिएँ । म त्यहाँ पनि उहाँ नजिक गएको थिएँ । मलाई श्रुतीबारे बुझ्न किन पनि मन थियो भने उहाँ अधिराजकुमारी हुनुहुन्थ्यो । मलाई लाग्थ्यो– म गाउँको एउटा सामन्य मान्छे त दरबारको छात्रवृत्ति पाएर यति ठूलो कन्फिडेन्स विकास भएको छ भने उहाँमा त्यो विकास कस्तो हुँदो हो ? म सोच्थेँ– दरबारमा हुर्किएकी श्रुती सरकार त के छैन होला ? अर्कोतिर रेडियो नेपालको कर्मचारी भएकाले धेरै अवसर पनि पाउँदै गएँ । राजा वीरेन्द्रको गद्दी आरोहण रजत महोत्सव मूल समारोह समितिमा म पनि थिएँ । रेडियो नेपालमा भएकाले र त्यति बेला गीतहरुका कारण चर्चामा भएकाले यस्ता कार्यक्रममा म पनि हुन्थेँ । पहिले दाङमा हुँदा पनि यस्ता विभिन्न कार्यक्रममा पनि मेरो संलग्नता हुन्थ्यो । त्यही महोत्सवको कार्यक्रमअन्तर्गत हामीले एउटा हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता राखेका थियौँ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको त्यो कार्यक्रमको संयोजक थिएँ म ।
त्यहाँ श्रुतीलाई हामीले प्रमुख अथितिका रुपमा बोलाएका थियौँ । त्यहाँ पनि म उहाँ नजिक गएँ । उहाँको नजिक गएर मैले भनेको थिएँ, ‘सरकारको पेन्टिङ अत्यन्त राम्रो छ, त्यसमा अझ राम्रो गर्नु न सरकार ।’ उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, ‘मलाई तपाईंको सुझाव राम्रो लाग्यो ।’ भेट हुँदा यस्ता कुरा गरिहाल्ने भएकाले मलाई अधिराजकुमारी श्रुतीले नजिकबाट चिन्नुभयो । पछि कार्यक्रमहरुमा भेट्दा उहाँले मलाई के छ तपाईंको खबर भनेर सोध्न नै थाल्नुभयो । विशेषतः मैले कुनै पनि कार्यक्रममा उद्घोषण गरेपछि धेरैले मलाई नोट गर्नुहुन्थ्यो । झन्, दरबार चाहिँ गीतसंगीत तथा कलासँग अत्यन्त निकट थियो । रानी आफैं कलासंस्कृतिबारे निकै जानकार हुनुहुन्थ्यो, राजा पनि यसमा ध्यान दिनुहुन्थ्यो । युवराज दीपेन्द्र पनि निकै ध्यान दिनुहुन्थ्यो, आफैं मादल बजाउनुहुन्थ्यो, नाच्नुहुन्थ्यो ।
अधिराजकुमारी श्रुती पनि गीत संगीतमा र नाचगानमा निकै ध्यान दिनुहुन्थ्यो । एकपटक मेरो आफन्तको विवाह थियो, पानीपोखरीमा । त्यहाँ अधिराजकुमारी श्रुती पनि आउने रे भन्ने कुरा मैले सुनेँ । म श्रुतीसँग भेट्न पाउँछु भनेर नै त्यो विवाहमा छिटो पुगेँ । त्यो समयमा श्रुतीको पनि विवाहको कुरा निकै चलेको थियो । हल्लाहरु निकै चलेका थिए । भारतीय युवराजहरु हेर्न आएका छन्, कुरा चलेका छन्, सलमान खानसँग त श्रुती उभिएको फोटो नै बाहिर आइसक्यो भन्ने हल्लाहरु निकै चलेका थिए ।
मैले यति भनिसकेपछि कोही पनि एक रौं पनि हलचल भएको थिएन, एउटै शब्द सुनिएको थिएन । श्रुती सरकार जोडले हास्नुभयो, ‘हाहाहा ।’ अनि भन्नुभयो, ‘डन्ट वरी, डन्ट वरी, आइ एम थिङ्किङ अन इट ।’
(नाेट: १८ वर्षअघि २०५८ सालमा जेठ १९ गते भएकाे राजदरबार हत्यकान्ड अहिलेसम्म पनि रहस्यमा नै छ । अहिले नेकपाकी राष्ट्रियसभा सदस्य तथा गायिका काेमल वलीकाे राज दरबारसँगकाे निकटताबारे हामीले गत वर्ष सिरिज गरेका थियाैँ । १९ जेठकाे सन्दर्भमा हामीले त्यही सिरिज पुनप्रकाशन गरेका छाैँ । – सम्पादक । )